‘प्रदूषणले विस्तारै-विस्तारै मारिरहेको छ’ – Dainik Samchar
‘प्रदूषणले विस्तारै-विस्तारै मारिरहेको छ’
केही दिनयता हामीकहाँ आँखाले प्रष्टै देख्ने र शरीरले तत्कालै महसूस गर्ने गरी प्रदूषण फैलिएको छ । हाम्रो शहर पहिल्यैदेखि धेरै प्रदूषित थियो, अहिले प्रष्ट महसूस भएको छ । यो विषयले महत्व नपाएको मात्र हो, हामीले आमाको पेटमा हुँदादेखि नै दूषित हावा लिइरहेका छौं ।
एक हप्तायता धेरै मानिसले आँखा पोल्ने, घाँटी खस्खसाउने, टाउको दुख्नेलगायत समस्या भोगिरहेका छन् । स्वस्थ मानिसलाई प्रदूषणले पारेको तत्कालीन असर हो, यो । दम रोगीहरूलाई त यसले सिकिस्तै पारेको छ । अस्पतालहरूमा यो प्रष्ट देखिएको छ । खोकी बढेर अस्पताल आएकामध्ये धेरैलाई प्रदूषणको कारणले यस्तो भएको भन्ने थाहा समेत छैन ।
गाह्रो भएर पनि विभिन्न कारणले अस्पताल आउन नसकेका बिरामीहरूलाई ‘इन्हेलर’ को मात्रा बढाउन, सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिइरहेकी छु । प्रदूषणको कारण बिरामीहरूको स्वास्थ्य खराब हुँदै गएको, मानिसको आयु विस्तारै–विस्तारै घटाउँदै लगेको थाहा पाउँदा फोक्सो सम्बन्धी डाक्टर भएको नाताले मलाई निकै नमज्जा लागिरहेको छ ।
यो बेला अति आवश्यक काम नपरिकन घरबाहिर ननिस्कनु नै राम्रो हुन्छ । दीर्घरोगीहरूले औषधि टुटाउनुहुँदैन । मर्निङ वाक गर्नेहरूले घरभित्रै व्यायाम गर्नुपर्छ ।
हावामा फैलिएका धुलीकणमा सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, ग्राउण्ड लेभल ओजनलगायत मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै हानिकारक रासायनिक पदार्थहरू मिसिएको हुन्छ । हावाको धुलीकण अत्यन्तै सूक्ष्म भएकाले सीधै फोक्सो र रक्तनलीहरूमा प्रवेश गर्छ । त्यसले शरीरमा धेरै नकारात्मक असर पार्न थाल्छ । यसले हृदयघात, पक्षघात जस्ता असर देखाउँछ । क्यान्सर र डिमेन्सिया हुने सम्भावना बढ्छ ।
सन् २०१५ को एउटा रिपोर्टले शिशु मृत्युको प्रमुख कारण प्रदूषणलाई मानेको छ । गत वर्ष विश्वभर प्रदूषणको कारणले एकमहिना मुनिका पाँच लाख शिशु मरेको अर्को रिपोर्ट छ । प्रदूषणले दम रोगीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना ४० प्रतिशत र मुटुरोगीको २० प्रतिशत बढाउँछ । प्रदूषणले क्यान्सरका बिरामीको मृत्यु हुने जोखिम १९ प्रतिशत बढाउँछ । त्यस्तै, ‘स्ट्रोक’ हुने जोखिम २० प्रतिशत बढाउँछ । हृदयघात, पक्षघात, क्यान्सर र डिमेन्सिया हुने सम्भावना २० प्रतिशत भन्दा बढी देखाउँछ ।
सवारी साधनहरूले सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड जस्ता घातक रसायन हावामा मिसाउँछन् । सवारी साधनले निकाल्ने धुवाँले ग्राउण्ड लेभल ओजन बढाउँछ । थोत्रा सवारी साधन र कमसल पेट्रोलियम पदार्थका कारण हाम्रो जस्तो गरिब देशहरूमा बढी प्रदूषण हुन्छ । ‘आमाकै पेटमा हुँदा प्रदूषित हावा खाएको’ यसै भनिएको होइन ।
घरभित्रकै हावाले पनि मानिसलाई असर गरिरहेको हुन्छ । आधाभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि खाना पकाउन दाउरा र गुइँठा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा खाना पकाउने महिला नै हुन्छन्, जसको कारण गर्भवतीहरूले आफ्नो गर्भमा रहेका सन्तानलाई समेत प्रदूषित हावा खुवाइरहेका हुन्छन् ।
प्रदूषणले हरेक दिन देखिने र दुख्ने गरी असर गरिरहेको हुँदैन । विस्तारै घातक असर गर्दै लैजाने भएकाले प्रदूषणलाई ‘साइलेन्ट किलर’ भनिन्छ । प्रदूषणले हामीलाई विस्तारै–विस्तारै मारिरहेको छ ।
प्रदूषणको असरबारे बुझ्ने, बुझाउने काममा सरकार र नागरिक दुवैको उत्तिकै भूमिका र उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । यो बेला पनि टोलटोलमा फोहोर जलाइरहेको देखिन्छ । यो भनेको हामी नागरिकहरूले नै प्रदूषण बढाउन योगदान गरिरहेका छौं । यातायातका साधन प्रयोगकर्ताहरूले नियमित सर्भिसिङ गरे धेरै हदसम्म प्रदूषण कम हुन्छ । सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लागू गर्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रण हुन्छ ।
सरकारले लिने नीति कडा र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । हाम्रोमा प्रदूषणको मात्रा तोकिएको भन्दा सधैं बढी किन हुन्छ ? नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नेहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हामीमध्ये धेरैमा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने भावना नै छैन ।
वयस्क र स्वस्थ मानिसमा अहिले देखिएको प्रदूषणको असर बढ्दै जाँदा निमोनियाको खतरा बढ्छ । दीर्घ रोगीहरूको फोक्सो त्यसै पनि नाजुक हुन्छ । यो प्रदूषणले उनीहरू अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने, मृत्यु हुने जोखिम दोब्बर बनाइसकेको छ । दमका रोगीलाई अक्सिजन नै चाहिने अवस्था आइसक्यो । बालबच्चाको समग्र ‘ग्रोथ’ मा दीर्घकालीन असर पार्ने अवस्था छ ।
यो बेला अति आवश्यक काम नपरिकन घरबाहिर ननिस्कनु नै राम्रो हुन्छ । दीर्घरोगीहरूले औषधि टुटाउनुहुँदैन । मर्निङ वाक् गर्नेहरूले घरभित्रै व्यायाम गर्नुपर्छ । अहिलेको लागि हरेक व्यक्तिले गर्ने प्रयास भनेको यिनै हुन् ।
Prevसेयर लगानीकर्ताले जान्नैपर्ने १० कुरा
Nextहोलीमा उच्छृङ्खल गतिविधि गरेको आरोपमा ३५ जना पक्राउ